ပိုက္ဆံေတြနဲ့ ပက္သက္ပီး သတိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ ( ၆ ) ခ်က္ – စွယ်စုံသုတ
ဘယ်တော့မှ ဝင်ငွေတစ်ခုတည်း ပေါ်မှာမရပ်တည်ပါနဲ့။ အခြားသော ဒုတိယဝင်ငွေ ဝင်နိုင်အောင် ရင်းနှီးထားပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာ ဝင်ငွေတစ်ခုထဲကို ခြေစုံပစ် ရပ်တည်နေရင် အဲ့ဒီ ဝင်ငွေရပ်တန့်သွားတဲ့နေ့ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဘဝမှာလည်း အားလုံး ဗြောင်းဆန် သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒုတိယဝင်ငွေ ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို အမြဲရှာထားပါ။
သင့်မှာ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ စွန့်လွှတ်ရတတ်တယ်။တစ်ချို့တွေက လူသာ မချမ်းသာတာပါ။ ကိုင်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကတော့ အပျံစားတွေ ချည်းပါပဲ။ ရေရှည်ကို မကြည့်ပဲ ရေတိုပဲ ကြည့်တတ်တဲ့ သူမျိုးတွေပါ။ သူများလုပ်တာ လိုက်လုပ်ချင်တယ်။
ဒါပေမယ့် သူများလို သူမချမ်းသာသေးဘူး ဆိုတာကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်က မချမ်းသာသေးချိန်မှာ ချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့ iPhone ပြိုင်ကိုင်တန်းသွားမကစားပါနဲ့။ သင်ပဲရှုံးသွား ပါလိမ့်မယ်။ မလိုတာတွေ ဝယ်နေတဲ့အတွက် လိုတဲ့အခါ သုံးစရာမရှိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သုံးပြီးလို့ ပိုတာကိုမစုပါနဲ့။ စုပြီးလို့ ပိုတာကို သုံးပါ။ သုံးပြီးလို့ပိုမှ စုမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီတစ်သက် သင်စုဖြစ်ဖို့ မလွယ်လောက်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံဝင်လာရင် အရင်ဆုံး သင်စဉ်းစားရမှာက ဘယ်လောက်စုမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ပြီးမှ ပိုတာကိုသုံးပါ။ စုဆိုတာကလည်း တစ်သက်လုံး စုဘူးထဲမှာ အဲ့ဒီိပိုကျဆံကို ထားဖို့ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ဘဝအတွက် လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးချဖို့ပါ။ သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးမြင့်ဖို့ သင့် အရည်အချင်းတွေကို မြှင့်တင်ရပါမယ်။ အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ သင်တန်းတွေ တက်ရပါမယ်။ စာအုပ်တွေဖတ်ရပါမယ်။ အဲ့ဒီအတွက် သင့်မှာ ပိုက်ဆံလိုပါတယ်။ အဲ့ဒီိစုငှတှေကေို သုံးနိုင်ပါတယ်။
4. ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်ပြီး စွန့်စားရာတွင်
ရေအတိမ်အနက်ကို ခြေ ၂ ချောင်းလုံးချပြီး မစမ်းပါနဲ့။ မစွန့်စားနဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ မစွန့်စားပဲနဲ့လည်း မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် စွန့်စားရာမှာတော့ ပါးနပ်ဖို့လိုပါတယ်။
အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ကိစ္စမျိုးကို ရှိသမျှ ပိုက်ဆံတွေ ပုံအောလိုက်တာမျိုး တော့ မလုပ်ပါနဲ့။
5. ပိုက်ဆံတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင်
ကြက်ဥတွေအားလုံးကို ဘယ်တော့ မှ ခြင်းတောင်းတစ်ခုထဲမှာ စုပြုံမထည့်ထားပါနဲ့။
အရင်းအနှီးလုပ်ပြီဆိုရင်လည်း ရှိသမျှ ပိုက်ဆံတွေအားလုံးကို တစ်နေရာထဲမှာ စုပြုံ မရင်းနှီးပါနဲ့။
6. ပိုက်ဆံချေးပြီး မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပတ်သက်လျှင်
ရိုးသားခြင်းဆိုတာ ရှားပါးပြီးစျေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်မွန် တစ်ခုပါ။
ဒါ့ကြောင့် ခပ်ပေါပေါ လူတွေဆီက မမျှော်လင့်ပါနဲ့။
သင်ရိုးသားသလို လူတိုင်းရိုသားမယ်လို့ဘယ်တော့မှအသေအချာ တွက်မထားပါနဲ့။
ရိုးသားမှုဆိုတာ ဒီခေတ်ထဲမှာ တော်တော်ကို ရှားပါးတဲ့ အရာပါ။
ဒါ့ကြောင့် ရူးရူး မိုက်မိုက်နဲ့ ဒီတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းကို လူတိုင်းဆီကမမျှော်လင့်မိပါစေနဲ့။
မူရင်းရေးသူအား Credit ပါ